Desktop | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Keyman Desktop Professional 9.0.476.0 | 13.11 MB
Home page - http://www.tavultesoft.com/keyman/
▼ keyman.com ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, January 17, 20153comments:
ကဏ္ဍ Desktop, Keyboard, Window
Devolutions Remote Desktop Manager Enterprise 10.1.0.0 Final | 68.62 MB
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, December 13, 2014 1 comment:
ကဏ္ဍ Desktop, manager
DisplayFusion Pro 7.0 Beta 11 Multilingual
DisplayFusion Pro 7.0 Beta 11 Multilingual | 11.75 MB
With DisplayFusion you can addataskbar to every monitor that works and looks just like the Windows Taskbar.
Or take advantage of advanced multi-monitor wallpaper support, Flickr Integration for image searching and fully customizable window management hotkeys.
These are justafew of the many things that DisplayFusion can do.
Home page : www.binaryfortress.com
▼ usersfiles ▼ OR ▼ shared.com ▼
ကဏ္ဍ Desktop, manager, Tools
StartIsBack Plus 1.7.0 Final Multilingual
StartIsBack Plus 1.7.0 Final Multilingual | 1.04 MB
Version +1.7?22 November 2014
Home Page : http://www.startisback.com/
ကဏ္ဍ Computer, Desktop, Window
Desktop Calendar 2.1.5.3390 | 3.15 MB
ကဏ္ဍ Computer, Desktop, widget, ပြက္ခဒိန်
Desksware Desktop iCalendar 3.0.0.508 Full Version Free Download
Desksware Desktop iCalendar 3.0.0.508 | 2.17 MB
Home Page : www.desksware.com
Downlaod link: Desksware Desktop iCalendar 3.0.0.508 ( 2.17 MB )
ကဏ္ဍ Desktop, widget, ပြက္ခဒိန်
သင့်ရဲ့ မျက်လုံး တစ်စုံအား F.lux Software ဖြင့် ကာကွယ်ပါ
F.lux Applicatoin သည် ကွန်ပျူတာ သမားများ နှင့် မျက်စိနှင့် ဆိုင်သော ရောဂါ ရှိသူများ အတွက် မရှိမဖြစ်
ဆောင်ထား သင့်သော မျက်စိ အတွက် အစွမ်းထက် Software ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
Software အား ကွန်ပျူတာ (သို့) ဖုန်း အတွင်း ထည့်သွင်း ထားခြင်းဖြင့် အချိန်၊ နေ့ရက်၊ နာရီ အလိုက် ကွန်
ပျူတာ အလင်း အမှောင်အား အလို အလျာက် ချိန် ညှိပေးမှာ ဖြစ်ပြီး Screen Brightness အား Warm ဖြစ်
အောင် ပြုလုပ်ထား ခြင်းဖြင့် ကွန်ပျူတာ အသုံးပြု သူ၏ မျက်စိ နှစ်ကွင်းအား ထိခိုင်မှု မရှိအောင် အကောင်း
Software အတွင်း အလိုအလျောက် အလင်းအမှောင် ချိန်ညှိသည့် စနစ်ပါရှိပြီး ပြည်ပနိုင်ငံတွင် ရောက်နေ
သူ ဖြစ်ပါကလည်း Zip Code or Location ထည့်ပေး ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံ အနေအထား လိုက် ရှိသင့်သည့် အ
လင်းအမှောင် များကိုတွက်ချက်ပြီး ချိန်ညှိပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာတော့ Automatic ချိန်
Internet ရှိသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ Online / Offline နှစ်မျိုးလုံး အသုံးပြုနိုင်ပါ.. စတင် အသုံးပြုလျှင်
ညအချိန်တွင် Screen မှာ အ၀ါရောင်သို့ ပြောင်းသွားပြီး Brightness Warm လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်...ထို
သို့ လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် အမြင်မှာ အနည်းငယ် ၀ါနေသော်လည်း တစ်ရက် နှစ်ရက် အတွင်း ကျင့်သား ရလာ
မှာဖြစ်ပါတယ်... Screen ပေါ် အားစိုက် ကြည့်ရှု ရခြင်းမျိုး မရှိဘဲ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြု နေစဉ် မျက်ရည်ကျ
ခြင်းများ ၊ မျက်စိ ယားယံခြင်းများ၊ မျက်ရိုး ကိုက်ခြင်းများ သိသိ သာသာ သက်သာ လာတာကို လက်တွေ့
ယခု စာရေးသူ Admin ကိုယ်တိုင် ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ပြီး အသုံးပြု နေသည်မှာ2လမျှ ရှိနေပါပြီ.....ထို့ကြောင့်
အဖိုးတန် လှတဲ့ မျက်စိ တစ်စုံအား ကာကွယ်ဖို့ အတွက် F.lux Software အား ယခုပင် ထည့် သွင်းကြဖို့ အကြံပေးလိုက်ရပါတယ်။
Windows , MAC , Linux , iPhone/iPad တို့တွင် အသုံး ပြုလို့ ရပါတယ်။ လိုအပ်သည့် Sofware အား
အောက်တွင် Download ရယူနိုင်ပါပြီ။
From: ဝင်းကမ္ဘာကျော် by Myanmar IT Helper
ကဏ္ဍ Desktop, Window
Michale Jackson and X-men theme (36 MB)
Theme အလန်းလေး လာပြီနော်။ Michael Jacken နဲ့ X-men Theme လေးပါ။ ဖိုင်ဆိုဒ်က
36 MB ကျော်ရှိပါတယ်။
ဒေါင်းလိုက်တဲ့ zip ဖိုင်လေးကို ဖွင့်ပြီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Theme Application လေးကို Right
click နဲ့ထောက်ပြီး Run as administrator နဲ့ run ပေးပါ။
From: အောင်ကျော်ခိုင်(ပုသိမ်) by Aung Kyaw Pathein
ကဏ္ဍ Desktop, Theme
window ရဲ့ Start Button ကို စိတ်ကြိုက်ပြောင်းနည်း
window7ရဲ့ Start Button လေးကို ကိုယ့် စိတ်ကြိုက်ပုံ ထားနိုင်ရန် Window7Start
button changer လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ ဆောာ့ဝဲလ်လေးကို သုံးရန် Strat
button လေးကို ဒီဇိုင်းထုတ်ပြီးသား ရှိမှ သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
window7Start button များကို စိတ်ကြိုက်ယူနိုင်ရန် http://www.deviantart.com/?
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ button လေးကို ရွေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ညာဘက်မှာ download zip ဆိုတာ
လေးကို နှိပ်ပြီးဒေါင်းရမှာပါ။ Download button ရှာမတွေ့မှာစိုးလို့ပါ။
ရလာတဲ့ ဖိုင်လေးကို တစ်နေရာရာမှာ extract လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် window7start button
changer လေးကို ဖွင့်ပြီး extract လုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်လေးကို ရွေးပေးလိုက်ရုံပါပဲခင်ဗျာ။
Desktop ပေါ်က ShortCut Icon လေးတွေကို စနစ်တကျ ထားချင်ရင်
Desktop ပေါ်က ShortCut Icon လေးတွေကို အောက်က ပုံလေးတွေ အတိုင်း စနစ်တကျ အုပ်စု
လေးတွေခွဲပြီး ထားပေးမဲ့ Software လေးပါ... စိတ်ဝင်စားရင် အောက်မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။
Access contents of any folder ina"fence" on the desktop
Swipe to access multiple screens of "fences"
Customize the color, look and feel of your "fences"
If included activation instruction not work try below:
1. Install Fences and click 'Finish'
2. Extract 'keygen.exe' (on your Desktop, for example)
3. Right click on 'keygen.exe' -> Properties -> Compatibility -> Check 'Run this program as an administrator'
4. Open Task Manager and kill processes 'Fences' and 'Explorer'. Once done, leave Task Manager open!!
5. In Task Manager, click File -> Run new task and type 'explorer' but MAKE SURE TO CHECK / TICK 'Create this task with administrative privileges'
6. Once Explorer is running, run 'keygen.exe' and click on 'Patch' (select .exe). Once done, click on 'Save License'.
7. After the above is done, open Task Manager, kill Explorer and click on File -> Run new task and type 'explorer' WITHOUT 'Create this task with administrative privileges' CHECKED / TICKED) ..... or restart Windows.
ကဏ္ဍ Desktop, Icon
Tiral Version Software တွေကို အမြဲတမ်း အသုံးပြုလို့ ရအောင် (Make All Softwares Full Version )
Tiral Version Software တွေကို အမြဲတမ်း သုံးလို့ရအောင် အချိန်ကို ဆွဲဆန့်ပေးတဲ့ Software လေးပါ။
အရင်တင်ထားတာ ဒေါင်းမရတော့ဘူး ပြောလာလို့ Version နှစ်မျိုးကို ထပ်တင်ပေး လိုက်ပါတယ်...။
အသုံးပြုပုံ ကတော့ အောက်မှာ တင်ပေးထားတဲ့ Time stopper ကို ဒေါင်းယူပါ။
Time stopper.exe လေးကို Install လုပ်ပြီး Run လိုက်ပါ။
နံပါတ် (1) ကို နှိပ်ပြီး စက်ထဲမှာ Install လုပ်ထားတဲ့ Tiral Version Software ကို C: > Program File
မှ တဆင့် Software နာမည်ရဲ့ .EXE ဖိုင်လ်ကို ထည့်ပေးပါ...။
နံပါတ် (2) မှာ 2014 (သို့) 2020 ထိ ရွှေ့ပေးလိုက်ပါ...။
နံပါတ် (3) မှာ Software နာမည်ကို ခပ်ဆင်ဆင် နာမည်တစ်ခု ရေးထည့်ပေးပါ...။
နံပါတ် (4) က Create desktop shortcut နှိပ်လိုက်ပါ...။
Tiral Version Software ကို အသုံးပြုတော့မယ် ဆိုရင် Desktop ပေါ်က အရင်ရှိပြီးသား Original Shortcut ကို Delete လုပ်ပြီး စောစောက လုပ်ထားတဲ့ Shortcut ကို နှိပ်ပြီး အသုံးပြုပါ... ဒါဆိုရင်
အဲ့ဒီ Software ရဲ့ Tiral ရက်ဟာ ဘယ်တော့မှ မကုန်ဆုံးတော့ပဲ အမြဲတမ်း သုံးလို့ ရသွားစေမှာပါ... ။
ဝင်းကမ္ဘာကျော် ဆိုဒ်မှ ကူးယူမျှဝေသည်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, December 26, 2013 No comments:
ကဏ္ဍ Desktop, Software, Window
Digital Countdown Ticker 1.0 Free Download
Digital Countdown Ticker 1.0 | 732.62 KB
Countdown Ticker Features:
Displays current date and time [digital clock] (day, month, hour, minute, second).
Counts down to the set date shows actual number of days, hours, minutes and seconds.
Countdown picker unlocked version allows set background display color.
Countdown picker unlocked version allows set digit color.
Sets the program window on top of other windows.
Hides or shows display subtitles.
Hides or shows program control panel.
hides or shows display panel.
Brings default settings.
Countdown ticker unlocked version saves current settings
Download Links: Digital Countdown Ticker 1.0 ( 732.62 KB )
ကဏ္ဍ Desktop, Software, widget
Desktop PC တစ်လုံး ဝယ်တော့မယ် ဆိုရင် သိထား သင့်သည်များ
Laptop ကို အသုံး ပြုသူ အများ စုရဲ့ ရည်ရွယ် ချက်ဟာ အလုပ် လုပ်ဖို့နဲ့ ဂိမ်းကစား ဖို့အတွက် ဘယ်နေရာ
ကိုမဆို သယ်သွားလို့ ရနိုင်အောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စွမ်းဆောင်မှု ကောင်းတဲ့ Laptop တွေဟာ ဈေးကြီး
တတ်သလို နောက်ဆုံးပေါ် ဂိမ်းတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် ဗွီဒီယို တည်းဖြတ် မှုနဲ့ Graphics ပိုင်း တွေမှာ မနိုင်တာ
မျိုးတွေ ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Desktop PC ကို ပြောင်းသုံးချင်လာတတ်ကြပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်မှာDesktop တွေဟာ စွမ်းဆောင်မှု အပြည့်အ၀ ပေးနိုင်တဲ့အပြင် စတိုင်ကျပြီး နေရာလည်း သိပ်မယူ တော့ပါဘူး။ အခုမှ စပြီး ကွန်ပျူတာကို သုံးမယ့်သူတွေဟာ Desktop တစ်လုံး ၀ယ်ဖို့အတွက်
အနည်းဆုံး ဒီအချက်တွေကို သိထားသင့် ပါတယ်။
Processor ဆိုတာ PC တစ်လုံးရဲ့ အင်ဂျင်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မြန်ဆန်ပြီး စွမ်းဆောင်မှု ပြည့်ဝတဲ့
Processor ဟာ သင့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာကို အချိန်တို အတွင်းမှာ အလုပ် တွေကို လျင်လျင် မြန်မြန်နဲ့
Intel’s Core Processor တွေဟာ အခြေခံ အားဖြင့် သုံးမျိုး ခွဲခြား ထားပါတယ်။ အဲဒါတွေ ကတော့
i3, i5, i7 တို့ ဖြစ်ပြီး သာမန်၊ ပိုကောင်း တာနဲ့ အကောင်းဆုံး ဆိုပြီး ခွဲခြားထား တာပါ။ Core i3
Processor ကိုတော့ လုပ်ငန်း သုံးဖို့နဲ့ Entry-level System တွေမှာ အသုံး ပြုတတ် ကြပါတယ်။
Core i7 ကိုတော့ High-end PCs တွေ အတွက် သုံးပြီး Core i5 ကတော့ သာမန် အလယ် အလတ်
Basic computing အတွက်ဆိုရင်တော့ Core i3 ဒါမှမဟုတ် Core i5 တို့ကို အသုံးပြုရင်အဆင် ပြေပေ
မယ့် တကယ်တမ်း စွမ်းဆောင်မှု အပြည့်အ၀ သုံးဖို့ လိုတာမျိုး ဒါမှ မဟုတ် Advanced Gaming တွေမှာ
ဆိုရင်တော့ Core i7 ကို အသုံး ပြုသင့် ပါတယ်။
Processor ဟာ PC တစ်လုံးရဲ့ အင်ဂျင် ဆိုရင် Memory ဟာ လောင်စာဆီ တစ်ခု ဖြစ်မှာပါ။ သင့်ရဲ့
Desktop PC မှာ Application အမျိုးမျိုးကို ဖွင့်မယ် ဆိုရင် Memory ကနေ တစ်ဆင့် တင်ပေး ရတဲ့
အတွက် သူဟာလည်း အရေးပါ ပါတယ်။ Memory အရွယ် အစားပေါ် မူတည်ပြီး သင့်ရဲ့ PC ဟာ မ
တူညီတဲ့ Application ဘယ်လောက်ကို တစ်ချိန် တည်းမှာ ပြရ မလဲ ဆိုတာကို တွက်ချက် နိုင်မှာ ဖြစ်
ပြီး Overall Performance ဟာလည်း Memory ပေါ်မှာ မှီခိုနေ ပါတယ်။
လက်ရှိ အချိန် မှာတော့ RAM 4GB ဆိုတာ အနည်းဆုံး ဖြစ်ပြီး Gigabyte ပိုများလေ၊ လုပ်ငန်း များများကို
ပိုလုပ်ပေး နိုင်လေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယို၊ 3D ရုပ်ပုံ တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တည်းဖြတ်တာ အစ ရှိတဲ့
လုပ်ငန်းမျိုး တွေကို လုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ အနည်းဆုံး Memory 8GB လောက်ကို အသုံး ပြုမှ အဆင် ပြေ
ပြေ လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ် လို့များ သင်ဟာ Memory 4GB ထက် များတာကို သုံးဖို့ လိုတယ်
ဆိုရင်တော့ သင် အသုံး ပြုမယ့် Windows Version ဟာ 64-bit ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။
Desktop PC တွေရဲ့ အားသာချက် တစ်ခု ကတော့ သုံးရတာ ပိုအဆင် ပြေစေဖို့ အတွက် အစိတ် အပိုင်း
တွေကို ထပ်ထည့်တာ လဲတာ မျိုးတွေ လုပ်လို့ ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ် အစား ပိုကြီးတဲ့ Tower Case
တွေမှာ အကန့်တွေ ပိုများတဲ့ အတွက် Hard Drives, DVD Drives, Graphics Card နဲ့ တခြား အစိတ်
အပိုင်း တွေကို စိတ်ကြိုက် ထည့်ဖို့ ပိုအဆင် ပြေစေ ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင့်ရဲ့ Tower Case ဟာ အသေးစား ဒါမှ မဟုတ် All-in-one အမျိုး အစား ဖြစ်ပြီး Expand
လုပ်ဖို့ အတွက် လိုအပ်တဲ့ Port တွေ ရှိမယ် ဆိုရင်တော့ External Device တွေကို ပေါင်းထည့် ပြီးတော့
Capabilities မြှင့်လို့ ရပါတယ်။ USB, Thunderbolt, Firewire, HDMI နဲ့ တခြား Port တွေဟာ တခြား
External Hard Drive တွေ ဖြစ်တဲ့ External Hard Drives, Webcams အစ ရှိတာ တွေကို ချိတ်ဆက်
အောင်ကျော်ခိုင်(ပုသိမ်) by ကိုဇော် သွင်
ကဏ္ဍ Desktop, ဗဟုသုတများ
StartIsBack Plus 1.0.5 ( for PC )
မိမိ PC က Start bar ကို window 8 ဒီဇိုင်း အလန်းလေးနဲ့ သုံးကြည့်ချင်တဲ့ မိတ်ဆွေများ အတွက်ပါ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, December 15, 2013 No comments:
ကဏ္ဍ Desktop, Theme, Window
PC setting Desktop Shortcut
ဒီ တခါပေးချင်တာ ကတော့ အခု့ ရက်ပိုင်း အတွင်းမှာ နာမည်ကြီးပြီး အသစ်ထွက် လာတဲ့ Windows
8 နှင့် 8.1တို့ အတွက် PC setting ကို လွယ်လွယ် သွားနိုင်ဖို့ အတွက် Desktop Shortcut အတွက် ပါ
Tiles တွေအသုံးပြု တဲ့ windows တွေမှာ ဟို menu ဖွင့် ဒီ button တွေ ဖွင့်လုပ်ရတာ တကယ်တော့
မလွယ်ဘူး ဟိုဝင် ဒီထွက်နဲ့ တိုင်ပါတ် နေကြ ရပါတယ်။ Software တခုခု ကိုပြင် ချင်လို့ ဒါမှ မဟုတ်
ထုတ်ချင်လို့ ရှိရင် လိုက်ရှာ ရတာကို က အလုပ်တခု ဖြစ်နေပါမယ်
အခု့ကျနော်ပေးမယ့် PC settin.exe လေးကို မိမိ ကြိုက်နှစ်သက် ရာ နေရာလေးမှာ install လုပ်ပေး
ထားလိုက်ပါ။ ဖိုင်ဆိုဒ် ကလည်း သေးသေးလေးပါ။
273.52 KB ပဲရှိပါတယ် ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် အရမ်း အသုံးဝင် ပါလိမ့်မယ်။
app.box tusfiles sendspace
Ref: ကိုလတ်(ကျွဲ ဆင်း)
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, October 20, 2013 No comments:
ကဏ္ဍ Desktop, Tools